Kungani IDubai Ithandwa Kangaka Ngabavakashi BaseNingizimu Melika? | Imisebenzi - Umsebenzi - Wokuhamba DCC
Ukubalekela othandweni e-Tilal Liwa Resort
Kukholelwa ukuthi cishe abantu abayizigidi ezingu-16 bavakashele i-Dubai njalo ngonyaka - futhi ngenani elikhulayo lazo ezivela emazweni aseNingizimu South East Asia njengeSingapore naseThailand, kufanelekile ukuhlola ukuthi kungani lokhu kuyilokho. Kusukela ezindaweni zokuthenga ezitolo kuya endaweni yayo ephelele kusuka ezinkampanini ezinkulu ze-South East Asia, kunezizathu eziningi zokuthi kungani Dubai iyindawo enhle kakhulu.
I-East East Asia ikhona eminye yezomnotho ezithuthuka kakhulu emhlabeni jikelele, njengeVietnam naseThailand. Futhi ngenxa yalokhu, kunabantu abaningi abanamanani aphezulu nalabo abasebenzisa amandla, futhi bonke basuke bezingela endaweni ethile ukuze bakhanyise imali. Dubai, nge izindawo eziningi zokuthenga ezitolo, linikeza ithuba elihle lokuzithengisa kwezinye izinto zokunethezeka. Ngamagatsha asezindaweni eziphezulu ezisentshonalanga ezinjenge-Hamley's shop yokudlala kanye nesitolo sikaM bloomingdale esitholakala eDaily Mall edumile, kunesikhalazo esikhulu kulabo abafuna ukuchitha.
Ukuya eholidini kuyajabulisa ngaso sonke isikhathi, kodwa kunezinzuzo ezithile nezinkinga ezithile ezihambisana nemodi ngayinye yokwenza amaholide. Ukuhamba ngezindiza eduze kwendawo kunganciphisa i-jet lag kanye nokuchitha isikhathi isikhathi sokuhamba, kodwa kunganciphisa izinga lokukhetha elikhona. Ingxenye yezizathu zokuthi kungani iDaibha ithandwa ngabantu abahamba ngeSouth East Asia ukuthi yindawo enhle kakhulu ephakathi kwe-long-haul and short-haul. Indiza eqondile esuka eBangkok eya e-Dubai ithatha amahora angaphezu kwama-ayisithupha, kuyilapho uHu Chi Minh City eya e-Dubai ingaphezu kuka-7 kuphela.
Kunezindiza eziningana ezihlukahlukene ezinikezela ngezinsizakalo emigwaqweni phakathi kwamadolobha amakhulu aseNingizimu Afrika ase-East Asia nase Dubai. Emirates, okuyinto yezindiza kazwelonke eDaily kanye nezinye izindawo ze-United Arab Emirates, iqhuba abaningi babo - kodwa i-Cathay Pacific, i-China Southern kanye nabanye nazo ziyatholakala ukukhetha kusuka. Futhi ngenkathi izindiza eziningi zigijima ngesikhathi futhi njengoba kuhlelwe, kufanelekile ukuthola umshuwalense wokuhamba zivikele ezenzakalweni ezingalindelekile ngenkathi uhamba, njengokukhansela noma izinkinga zokuthutha.
Futhi kunjalo futhi ukuthi kukhona ukufana kwamasiko phakathi kweNingizimu East East nase Dubai, futhi. Amanye amafomu ezokuzijabulisa, njengokuphuza utshwala, awawuthandwa kakhulu eNingizimu East Asia: Ngokwesibonelo, i-Indonesia, inezimboni ezilawulwa kakhulu ngokweqile ngenxa yabantu abaningi abangamaSulumane. Lolu hlobo lwezenzo luyehla kakhulu eDairobi, njengoba kungqubuzana nomthetho wokuphuza utshwala ezindaweni eziningi zezwe.
I-Dubai inesithembiso esiningi kunoma ubani ofuna ukuyivakashela, futhi konke okuvela ezitolo kuya kwesikhungo kunikezwa lapha. Lokho kuchaza ukuthi kungani kukhona abantu abaqhamukayo ukuvakashela amandla emandla aseMpumalanga Ephakathi njalo ngonyaka, futhi kungani kungenzeka ukuthi uhlale uthanda kakhulu eminyakeni ezayo.